Top 5 nước tương ngon nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 nước tương ngon nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Izinongo ziwumphefumulo wesitsha. Kuye ngesifunda, kuye ngokuthi indlela yokucubungula, umndeni ngamunye uzoba nomkhuba wokusebenzisa izinongo ezithile. Lapho isoso ye-soy iyi-condiment okufanele ube nayo ekhabetheni lasekhishini, ngokuthula kodwa inikela kakhulu ekunambithekeni kwezitsha eziningi zaseVietnam.
Lokhu kubalulekile, kodwa akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi iyiphi i-soy sauce okufanele ayikhethe. Ngakho-ke esihlokweni sanamuhla ngizophakamisa izinhlobo ezi-5 ezidume kakhulu zesoso yesoya eVietnam namuhla, ake sithole manje!
1 Eziyi-5 ezihamba phambili ze-soy sauce zango-2022
1.1 I-Maggi Concentrated Soy Sauce 700ml
1.1.1 Buyekeza Ngokushesha i-Maggi Egxilile Soy Sauce 700ml
1.2 I-Nam Duong Soy Sauce Concentrate 500ml
1.2.1 Isibuyekezo esisheshayo i-Nam Duong Soy Sauce Concentrate 500ml
1.3 I-Tam Thai Tu Nhat Ca Soy Sauce 650ml
1.3.1 Ukubuyekeza okusheshayo Tam Thai Tu Nhat Ca Soy Sauce 650ml
1.4 Chin-Su chili garlic soy sauce 250ml
1.4.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-Chin-Su chilili likagalikhi isoso soya 250ml
1.5 I-Cholimex Soy Sauce Huong Viet Hao Vi Chai 500ml
1.5.1 Ukubuyekezwa Okusheshayo I-Cholimex Soy Sauce Huong Viet Hao Vi Chai 500ml
2 Ithebula lokuqhathanisa le-soy sauce ephezulu engu-5 ehamba phambili ka-2022
3 Yenziwa kanjani i-soy sauce?
4 Isetshenziselwani i-soy sauce?
4.1 1. Isetshenziselwa ukwenza isoso yokudipha
4.2 2. Isetshenziselwa ukuhambisa izithako ngaphambi kokucubungula
4.3 3. Ilungele abadla imifino
4.4 4. Kucebile ngemisoco emihle empilweni
5 Izinhlobo zesoso yesoya emakethe namuhla
5.1 1. Isosi yesoya yendabuko
5.2 2. Isosi yesoya yezimboni
6 Indlela yokukhetha i-soy sauce yekhwalithi nephephile
7 Qaphela uma usebenzisa i-soy sauce
8 Indlela yokulondoloza i-soy sauce?
9 Iyiphi i-soy sauce okufanele ngiyikhethe?
9.1 I-Maggi Concentrated Soy Sauce 700ml
10 Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Eziyi-5 ezihamba phambili ze-soy sauce zango-2022
Uphawu lokuhweba: Maggi
I-Maggi Concentrated Soy Sauce 700ml
Buyekeza Ngokushesha i-Maggi Egxilile Soy Sauce 700ml
I-Maggi. Isoso Yesoya Egxilile Kwenziwe kusuka kubhontshisi wesoyakuminyene uma ngisebenzisa umkhiqizo engiwuzwayo Ukunambitheka okumnandi kakhulu, okumnandi nokunomsoco.
Ungashintsha ngokuphelele usawoti noma isinongo, kodwa wenze isidlo sibe mnandi kakhulu.
I-soy sauce lapho uthela abe nokuqhathanisa okuthileumklamo omuhle webhodlela
Intengo nayo inengqondo, kodwa ngombono wami, kufanele uthenge ibhodlela elikhulu ukuze ulondoloze imali.
Imnandi futhi inosawoti ngokulingene
Uphawu lokuhweba: i-southern Ocean
I-Nam Duong Soy Sauce Concentrate 500ml
Isibuyekezo esisheshayo i-Nam Duong Soy Sauce Concentrate 500ml
Ngokocwaningo lwami, uhlobo lwesosi yesosi ye-Nam Duong luwumkhiqizo we-Nam Duong International Food Co., Ltd., ngakho-ke lujwayeleke kakhulu kubathengi.
Ukunambitheka okucebile, hhayi okusawoti kakhulu, kulula ukukudla, Kuhle empilweni ukusiza ukwengeza i-iron emzimbeni.
Izindleko zomkhiqizo eziphansi kufanele ikhethwe imindeni eminingi.
Uphawu lokuhweba: Izikhulu ezintathu zoMqhele
I-Tam Thai Tu Nhat Ca Soy Sauce 650ml
Ukubuyekeza okusheshayo Tam Thai Tu Nhat Ca Soy Sauce 650ml
Nami uma usebenzisa I-Tam Thai Tu soy sauce Ngizizwa kanje ukunambitheka okunosawoti kancane. Kodwa Iphunga elimnandi kakhulu lizofaneleka kakhulu njenge-marinade.
Ngokusho kolwazi engilufunde kumkhiqizi, umkhiqizo eyenziwe ngobhontshisi wesoya wemvelo, Izithako ze-iodine zilungele impilo. Ayiqukethe i-3MCPD.
Uphawu lokuhweba: I-Chin-Su
Chin-Su chili garlic soy sauce 250ml
Ukubuyekeza okusheshayo i-Chin-Su chilili likagalikhi isoso soya 250ml
Uma usebenzisa lo mkhiqizo, ngizwa kulula Ugaliki nopelepele kuyatholakala, ngakho vele uthele enkomishini ozoyisebenzisa, ungachithi isikhathi ngokulungiselela.
Kodwa ngicabanga ukuthi yingoba ngingumuntu odla okubabayo engizizwayo Ukunambitheka akukona okubabayo kakhulu, kuzofaneleka kulabo abangathandi ukudla okubabayo. Futhi uma uthanda ukudla okubabayo, ungafaka upelepele ukuze ukwenze kube mnandi kakhulu. ukunambitheka okucebile kakhulu.
Umkhiqizo unesici esincane esinjalo imikhiqizo emincane yamabhodlela isetshenziswe ngokushesha kakhulu.
Inhlanganisela kagalikhi, upelepele kanye nopelepele kwanele.
Uphawu lokuhweba: I-Cholimex
I-Cholimex Soy Sauce Huong Viet Hao Vi Chai 500ml
Ukubuyekezwa Okusheshayo I-Cholimex Soy Sauce Huong Viet Hao Vi Chai 500ml
Nge-Huong Viet soy sauce uma usebenzisa, ngiyabona Iphunga linamandla impela futhi ukunambitheka kunosawoti omningi ekunambitheni kwakho.
Isoso yesoya insundu ngokumnyama futhi izacile kodwa hhayi obukhulu njengezinye izinhlobo zesoso yesoya.
11.5 kcal / 100ml
Ithebula lokuqhathanisa le-soy sauce ephezulu engu-5 ehamba phambili ka-2022
Yenziwa kanjani i-soy sauce?
Isoso yesoya yenziwe ngo-100% wesoya yemvelo nofulawa kakolweni. Kusukela ezikhathini zasendulo, isoso yesoya ibikhiqizwa ngendlela yendabuko yokuvutshelwa nezindlela zokuphisa. Kodwa-ke, ubuchwepheshe banamuhla ikakhulukazi bukhiqiza isoso yesoya ngendlela yesimanje ye-asidi hydrolysis.
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela, kufanele ihambe ngenqubo ende enezinyathelo ezigcwele ezinjengokuhlanza, ukuthungatha, ukuxuba, ukufukamela, i-hydrolysis, i-extraction, i-filtration, i-pasteurization, njll., bese ikhipha ibhodlela futhi ilihambise ezandleni zabathengi.
Isinyathelo esibaluleke kakhulu sokwenza isoso yesoya ukufukamela nokuvutshelwa. Uma umenzi esebenzisa ukuvutshelwa kwemvelo okuhle kakhulu nokuphelele kwamakhowe abilisiwe, isoso le-soy liyoba “lilungile”, ligcine ukunambitheka okugcwele kwe-soya futhi okumnandi nokucebile.
Isetshenziselwani i-soy sauce?
1. Isetshenziselwa ukwenza isoso yokudipha
Okokuqala, i-soy sauce iyi-sauce emnyama eyaziwa kakhulu kuwo wonke umndeni. Isosi yesoya imnandi ngokwemvelo, ayinawo usawoti omningi, futhi inephunga elimnandi, ngakho ivame ukusetshenziswa njengesoso yokudipha esikhundleni sesoso yenhlanzi.
Uma ufuna ukucwilisa imifino nezithelo ezibilisiwe, okuhlinzekwa ngesaladi exutshwe, inyama yenhlanzi, ama-noodle athosiwe, irayisi elimhlophe, njll., isoso ye-soy iyisinqumo esihle.
2. Isetshenziselwa ukuhambisa izithako ngaphambi kokucubungula
Ukugcoba nge-soy sauce kuzosiza izithako emva kokucubungula ukuba zicebe, zibe mnandi kakhulu futhi zithandeke.
Qaphela kuphela okufakwe emanzini ngezithako ezithile ezifana nenyama nenhlanzi esetshenziselwa ukubilisa, ukosiwa noma ukuthosa!
3. Ilungele abadla imifino
Ivutshelwe kubhontshisi wesoya, ukolweni, usawoti namanzi, isoso yesoya ilungele abadla imifino. Isoso yesoya isiza abalandeli bakaBuddha ukuthi babe lula ekudleni nasekulungiseni izitsha.
4. Kucebile ngemisoco emihle empilweni
Inani lokudla okunomsoco ku-soy sauce lihlanganisa amandla, amafutha, i-fiber, amaprotheni, ushukela, i-magnesium, insimbi, amavithamini, njll., ngakho-ke kuhle kakhulu empilweni. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-soy sauce ingasiza ekuthuthukiseni ukugaya, okuhle emathunjini, umfutho wegazi ophansi, nokunye.
Mhlawumbe unentshisekelo: Amafutha okupheka aphezulu angu-5 aphezulu, ikhwalithi futhi aphephile empilweni
Izinhlobo zesoso yesoya emakethe namuhla
Ngokusekelwe endleleni yokukhiqiza, ngizohlukanisa isoso yesoya zibe izinhlobo ezi-2:
1. Isosi yesoya yendabuko
Lolu wuhlobo lwesoso yesoya ekhiqizwa ngesandla ngokwezindlela zendabuko ezinikezwe izinkulungwane zeminyaka.
Abakhiqizi besoso ye-soy basebenzisa ubhontshisi wesoya ukuvubela kanye ne-metabolism ngama-microorganisms. Ngenxa yalokho, isoso yesoya yendabuko ayinazo izinto eziyingozi njenge-3-MCPD kodwa iphephe ngokuphelele futhi ayinabungozi.
Ngokubuyisela, inqubo yokukhiqiza isoso yesosi yendabuko kufanele idlule enkathini yezinyanga ezi-3-6, edinga izindleko eziningi, abasebenzi, indawo yendawo kanye nenzuzo ephansi, inzuzo encane yemali, njll.
Nakuba lingekho igama lomkhiqizo elaziwayo, linokunambitheka okumnandi nombala omnyama.
2. Isosi yesoya yezimboni
Lapho isoso yesoya yendabuko ithatha isikhathi eside kakhulu futhi ingatholakali ngobuningi, abakhiqizi abaningi baphendukela kusoso wesoya wezimboni.
Isosi yesoya yezimboni yeqa isigaba sokuvutshelwa nesokuguqulwa, futhi isebenzisa ngokuqondile ubhontshisi wesoya osuswe uwoyela ukuze i-hydrolyze i-hydrochloric acid. Yile hydrolysis ukuthi izinkampani eziningi zingakhiqizi ubuchwepheshe obanele ukudala i-3-MCPD enobuthi eyingozi kakhulu empilweni yabantu.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhiqizwa kwesoso yesosi yezimboni kuyashesha, kushibhile, futhi ubuningi buhlale bunele ukuhlangabezana nezidingo zabantu baseVietnam.
Indlela yokukhetha i-soy sauce yekhwalithi nephephile
Ukuthi i-soy sauce ikhiqizwa ngezindlela zendabuko noma zezimboni, lapho ukhetha, kufanele unake lezi zindlela ezilandelayo:
Khetha uhlobo lwesoso yesoya oluvutshelwe ngokwemvelo ukuze uthole ukunambitheka okumnandi okuhamba phambili, ogcina ukunambitheka okugcwele kukabhontshisi wesoya.
Khetha i-soy sauce ezithakweni ezingenawo ama-preservatives, aziqukethe imibala yokwenziwa ukuze uqinisekise ukuphepha kwempilo.
Khetha ukuthenga isoso ye-soy ezinkampanini ezinedumela elihle, ezitolo ezihlonishwayo futhi uhlolwe ikhwalithi.
Khetha isoso yesoya esanda kukhiqizwa, usuku lokuphelelwa yisikhathi luselude
Qaphela uma usebenzisa i-soy sauce
I-soy sauce kufanele yengezwe esinyathelweni se-seasoning. Nciphisa i-soy sauce ngqo ezitsheni ezipheka, ezibhaka, njll. Ngalesi sikhathi, ukudla kusezingeni eliphezulu lokushisa, okwenza kalula ukuthi isoso le-soy lishise, lidale ukunambitheka okubabayo, okunzima nokulahlekelwa ukunambitheka kwesitsha.
Ungasebenzisi isoso yesoya kakhulu. Isoso yesoya iqukethe usawoti omningi. Uma isetshenziswe kakhulu kusho ukuthi umzimba uzoba nosawoti oweqile, okuholela ezifweni zenhliziyo, isisu, umfutho wegazi, izinso ngisho sengozini yokushaywa unhlangothi.
Isoso ye-soy nayo iqukethe ukolweni, ngakho-ke kwabanye abantu abangezwani nalesi sithako, ingabangela izimpawu ezifana nekhanda elibuhlungu, isiyezi, ukujuluka, ukuqubuka, njll. Uma umzimba ungezwani nokolweni, isoso ye-Soy akufanele isetshenziswe.
Indlela yokulondoloza i-soy sauce?
Isosi yesoya ngemuva kokuthenga idinga nje ukugcinwa endaweni epholile, kude nokukhanya kwelanga. Ngamabhodlela e-soy sauce avuliwe, kufanele asetshenziswe kuphela phakathi nezinyanga ezingu-1-2. Ngesikhathi sokusetshenziswa, ungafaki esiqandisini, ukushisa okuphansi kwe-soy sauce kulula ukumunyu.
Iyiphi i-soy sauce okufanele ngiyikhethe?
Uhlobo ngalunye lwesoso yesoya lunamandla athile kanye nezinkinga ezithile ezisele. Ngokuhlaziya okungenhla, ngithola ukuthi i-Maggi 700ml yesosi yesoya egxilile ingumkhiqizo ofaneleka kakhulu ngoba:
Umkhiqizo unomthamo omkhulu we-700ml
Ukunambitheka okucebile, i-soy sauce eqinile
Imikhiqizo ye-Nestlé Vietnam Co., Ltd
Njengoba kushiwo, ekubunjweni kwe-soy sauce iqukethe okuqukethwe kukasawoti, ngakho-ke uma isetshenziswe ngokweqile, kuyoba yingozi kakhulu empilweni. Ezinye izifo ungahlangabezana nazo ngenxa kasawoti omningi njengesifo senhliziyo, izinso, umfutho wegazi, ukukhuluphala ngokweqile, ukukhuluphala ngokweqile, njll.
Ungagcini isoso le-soy esiqandisini. I-soy sauce ekushiseni okuphansi izoba muncu, izolahlekelwa ukunambitheka.
Impendulo ithi cha. Amafutha e-oyster isoso ekhishwe noma ekhiqizwa yizimboni equkethe i-oyster essence. Isoso yesoya yenziwe ngobhontshisi wesoya ovutshiwe ngokufakwa noma ngaphandle kofulawa kakolweni. Ngokuphathelene nokuthungwa, amafutha aminyene kancane, ane-viscous, hhayi njengokukhanya njengesosi ye-soy.
Isosi yesoya emnyama izoba ngcono ngoba icwiliswa isikhathi eside, ifakwe ama-molasses ezithakweni.
Lokho kungokwesosi yesoya ekhiqizwa ngezindlela zendabuko, futhi amasoso esoya ezimboni manje asebenzisa umbala wokudla, ngakho awukwazi ukuthembela kulo mbandela ukuze uhlole okuhle noma okubi.
Nawa amanye amasoso esoya aziwa kakhulu namuhla. Ngokuya ngokunambitheka komuntu ngamunye kanye nendlela yokulungiselela ukudla, ukhetha uhlobo olulungile lwesoso yesoya. Ungakhohlwa ukusebenzisa i-soy sauce ngaphakathi komkhawulo ovunyelwe ukuze uqinisekise ukuphepha kwezempilo!